Joomla! - MYSTERY ZILLION
January 2008 edited March 2009 in PHP
Joomla! နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောမယ်လေ။ ဘာ component လိုလဲ။ Joomla! နဲ့ ဘယ်လို မျိုး site ဆွဲချင်လဲ။ ကိုယ့် စက်ထဲမှာ စမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ XAMMP ကို သွင်းထားရပါမယ်။ http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html မှာ သွားပြီး down လိုက်ရုံပါပဲ။ ပြီးရင်တော့ setup_xampp.bat ကို run လိုက်ပါ။ xampp_start ကို run ပြီး localhost ကို စတင် run နိုင်ပါမယ်။ www.joomla.org မှာ joomla ကို download ချလိုက်ပါ။ XAMMP ရဲ့htdocs ဆိုတဲ့ folder အောက် ဖြည်ချပြီး joomla ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အသုံးဝင်တဲ့ link လေးကတော့
Joomla အကြောင်းပြောကြရအောင်ဆိုလို့ joomla နဲ့ ရေးထားတဲ့ ဆိုက်တစ်ခုကို ကြော်ငြာချင်ပါတယ် သက်ဆိုင်တဲ့နေရာကလည်း တစ်နေရာမှ မတွေ့တော့ ပိုဆိုးတယ်ဗျ ...
www.theinngu.org ပါ ... လာလည်ပါ ...
ကျွန်တော်ကတော့ Joomla ကိုအခုမှစစမ်း မလို့ပါ။ Joomla 1.5 နဲ့ Joomla 1.2xx ကိုဘယ်ဟာ စစမ်း
ရမလဲ ဆိုတာလမ်းညွှန်ပေးပါ။ ပြီးတော့ ပြည့်စုံတဲ့ Tutorial Site တွေရှိရင် ပြောပြပေးပါ။
စကားမစပ် Bro တို့ကသာ စထားတာ။ MZ မှာ Joomla user သိပ်မရှိသေးဘူးထင်တယ်။
bu99y wrote: »
ကိုယ်ရန်တော် တပ်မှူးရှိတယ်.... (CMS)နဲ့ ကာထားတယ်..
ကျွန်တော်လည်း Admin ကြီး အပူကပ်ပြီ Joomla လေ့လာနေတာပါ...
ကိုပီဇီနဲ့ ကျွန်တော်ကတော့ Joomla ကိုသုံးမှသုံးပဲဗျ...
Joomla1.5 နဲ့ 1.0.5 ဆိုပြီး နှစ်ခုရှိတယ်...
Joomla 1.5 အတွက် component တွေ မစုံသေးဘူး...
Joomla 1 ကတော့ စုံတယ်ဗျ...
စစမ်းချင်ရင်တော့ ကိုယ့်စက်ထဲမှာ local စမ်းလို့ရပါတယ်...
အခုတလော မအားတာကြောင့် ဘာ topic မှာမှ သေသေချာချာမပြောဖြစ်သေးတာပါဗျာ..
နောက်လာမှာပါ... စိတ်ချ... Joomla install အတွက် ရေးမလို့လုပ်ထားပါတယ်... မအားသေးလို့ပါဗျာ..
အနော်လဲ ကိုပီဇီဆီမှာ သင်နေပါတယ် ... ကျွန်တော့်နာမည်လေးပါ ထည့်မှတ်ပေးပါ ..
joomla user ထဲမှာပေါ့ မကြာခင် သားသားရဲ့ web site လေးကို ၀င်ရောက်ကြော်ငြာပါ့မယ် ။
မပြောကောင်းတာတော့ မှန်ပါတယ်။ ဒါပမယ့် Joomla နဲ့ပက်သက်တဲ့ Post သိပ်မတွေ့လို့
Bro ကြီးတွေဆီက Post တွေတင်လာအောင် ကျပ်ပေးတာပါ .. ဟီးဟီး :1: ။
ipod nano game လေးတွေရှာပြီး ဒီမှာ တင်လိုက်ဗျ အက်ဒမင်တစ်ယောက်က လိုချင်နေတယ် အဲဒါရရင် သူဒီဘက်စိတ်လည်လာလိမ့်မယ် ..
Now I want to change banner image. I can chage image and font inside Media Manager Panel and FrontPage Manager Panel. Now I want to change Banner Photo. But I can't change inside Manage Banner Panel. Pls tell me how to do and how to overwrite. Pls respond as soon as possible because just now I do it.
Admin ကြီးတို့က သိပ်မေးလွန်းအားကြီးရင် မကြိုက်ဘူး။
ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး ရှာကြည့်တဲ့ အကျင့်လေး user တွေမှာရှိစေချင်တဲ့ပုံပါပဲ။
ဟုတ်တယ်ဗျ .... MrDBA ကြီးကအဆိုးဆုံး ... ဟဲ ဟဲ စတာနော် ... စိတ်ဆိုးရဘူး ...
ကို wave ရေ ... ကျနော်လဲ joomla ကိုအခုမှစလေ့လာနေတုန်းပဲဗျို့ ...
အခုတော့ မသိတဲ့အကြောင်းရေးလိုက်တာပါ ... သိရင်ပြောပြမယ်နော် .... မကြာမီလာမည် .... မျှော် .....
I never follow eazy way. Really I can't do it. I haven't been to learn PHP Language.
If you help me, I can improve within short time. If you don't help, I must learn my self.
ကို wave ရေ .... ကျနော်လဲ မသိတဲ့အကြောင်းပြန်ရေးတာပါဗျာ ... တမင်မပြောတာမဟုတ်ပါဘူး ... ကျနော့်တုန်းက install တောင်မလုပ်တတ်ဘူး .... install directory ကိုဖျက်ရမယ်ဆိုတာမှမသိတာကိုး ... အဲ့ဒီတုန်းကလဲ ၂ လလောက်ပြစ်ထားကြတယ် ( ... အခုတော့ joomla ဘက်မလှည့်ဖြစ်သေးဘူး ... website တစ်ခုဖြစ်ညှစ်ပြီးဆောက်နေရတယ် ... dynamic ဖြစ်အောင်လို့ ... (
ကိုယ့်ဆရာတို့ ရေ ဆက်ရေးကြအုံးလေဗျာ
ဒီမှာ install လုပ်ပြီး ပြီ။
ဒါကတော့ http://www.thadarphyu.net/joomzack/ ကျွန်တော် ရဲ့ Joomla base site ဖြစ်ပါတယ်။ Joomla နဲ့ ဆိုင်တဲ့ Reference လုပ်လို့ ရမယ့် POST တွေလည်းရေးထားပါတယ်။ ကို emo
install လုပ်ပြီးရင် ဆက်လုပ်လို့ ရတဲ့ ဟာတွေကို ရေးထားပါတယ်။ ကျွန်တော် Site လေးက Joomla ကိုလေ့လာချင်တဲ့ သူတွေ အားလုံးကို ရည်ရွယ်ပြီး လုပ်ထားတားဖြစ်လို့ အားလုံးကို လာကြည့်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
ဝေဖန် အကြံပြူခြင်း များလည်း လက်ခံပါတယ်။
ဒါကတော့ http://www.thadarphyu.net/joomzack/ ကျွန်တော် ရဲ့ Joomla base site ဖြစ်ပါတယ်။ Joomla နဲ့ ဆိုင်တဲ့ Reference လုပ်လို့ ရမယ့် POST တွေလည်းရေးထားပါတယ်။
... ကို zack site က မိုက်တယ်ဗျာ...
အချိန်ကုန်ခံပြီး အားလုံးအတွက် ေ၀ငှပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ
ကို emo ရေ ကျေဇူးပါဗျာ အဲလိုပြောတာ။ တကယ်ပြောတာပါ။ အလိုပြန်ရေးပေးတာမြင်ရတော့ ကျွန်တော်လည်းပင်ပန်း ရကျိုး နပ်ပါတယ်ဗျာ။ ဝမ်းလည်းသာပါတယ်ဗျာ။ ဘာလို့လဲဆိုရင် ကျွန်တော် Site လေးရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက် က Joomla ကိုလေ့လာချင်နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူငယ်တွေ အတွက် လွယ်ကူစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာချင်သူတွေအတွက် တစ်စုံတစ်ခု လမ်းစလေး ရမယ်ဆို ရင် ကျွန်တော် ပညာ ဒါနပြုရ ကျိုး လေး နပ်ပါတယ်။ Joomla ကိုလေ့လာရင်း ပျင်းလာရင် Reader's Corner ကိုဝင်ဖတ်ဖို့လည်း ဖိတ်ခေါ်တယ်ဗျာ။
joomla အကြောင်းပြောကြရအောင်ဆိုလို့ joomla နဲ့ ရေးထားတဲ့ ဆိုက်တစ်ခုကို ကြော်ငြာချင်ပါတယ် သက်ဆိုင်တဲ့နေရာကလည်း တစ်နေရာမှ မတွေ့တော့ ပိုဆိုးတယ်ဗျ ... :d
အဲဒီ ဆိုဒ် မျိုးလုပ်ချင်တယ်ဗျာ
ကျွန်တော် joomla ကို အင် စတော လုပ်ပြီးတော့ hosting တင် လိုက်တယ်
အထဲက joomla ဆိုတဲ့ အပေါ်ဆုံးက ပေါ်နေတဲ့ joomla logo ကို ပြောင်းချင်းတယ်
ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဆိုတာ တစ်ချက်လောက် ပြောပြပေးပါအုံး
ပြီးတော့ အဲဒါတွေကို Sql database ဆောက်ခိုင်း တာ ဆိုတာ နားမလည်းဘူး
phpmyadmin ၇ဲ့ အသုံးပြုပုံ ကြောင်းလည်းသိချင်တယ်.
I already answered at here
Joomla ထဲက content dataတွေ၊ component , module, plgu-in စတာတွေရဲ့ setting တွေကို store လုပ်ဖို့ mysql ကိုသုံးတာပါ။ phpmyadmin ဆိုတာ mysql database ကို Browser ကနေပြီး access လုပ်လို့ရအောင် ရေးထားတဲ့ application ပါ။ ဒါမှ hosting ပေါ်မှာ သုံးရတာ အဆင်ပြေမှာပါ။ ဒီ link လေးမှာ reference doc တွေရှိပါတယ်။